Wholesale FEELM Won iF Dhizaini Mubairo 2020 inyowani yekugadzira matomhu tekinoroji. fekitori uye vagadziri | SMOORE
FEELM Won iF Dhizaini Mubairo 2020 inyanzvi yekugadzira matomhu muchina.
Nenyaya yezvakatipoteredza ye-e-midzanga inogamuchira zvinowedzera kunetsekana, inhau dzakanaka kuti vamwe vagadziri vari kuzvitora zvakanyanya mukuita kwavo. Iyo Inodonhedzwa Pepa E-mudzanga, anokunda iyo 2020 iF Mubairo, ibasa reFEELM, inyanzvi yeatomization tekinoroji brand.
Iyo FEELM chigadzirwa inoratidzira nyowani eco-hushamwari bepa, iyo inovandudza kudzikisira kune inoshamisa mwero we76% muhuwandu kana ichienzaniswa neyakajairika epurasitiki. Zvakare, iwo akawanda-masenduru mapepa-ekuumbisa dhizaini anoonekwa nehutsanana uye nemagariro mabasa. Rwunze rwekunze rwechinongedzo chinogona kubvamburwa chisati chapfuudzwa kune vashandisi vanotevera gumi nemashanu. Iyi dhizaini inodzivirira hutano hwako uye inoparadzira pfungwa yekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza panguva yekushamwaridzana pakati pevanhu vakuru vanoputa.
IFF DESIGN AWARD ndeyemukurumbira wepasirese makwikwi ekugadzira muchigadzirwa, kurongedza, kuvaka, dhizaini yebasa, nezvimwe. Kutanga kupihwa mu1953, itndiyo yekare yakazvimirira dhizaini dhizaina munyika,mucherechedzo weakakosha dhizaini kubudirira ayo anotarisa pasimba rekugadzira.
FEELM inopa hunyanzvi uye hwakasarudzika kudziya tekinoroji yeyakavharwa pod masisitimu. NJOY, RELX, HEXA, Haka, VAPO, Alfapod, uye mamwe akawanda mabhenji akatakurwa neFEELM tekinoroji. Iyo yekutengesa vhoriyamu yemapodhi ane FEELM mukati yapfuura 1 bhiriyoni.
Zvakafanana neVaporesso uye CCELL, FEELMis rakazvimirira bhizinesi chikamu cheShenzhen SMOORETechnology Limited. Kune nyanzvi dzinopfuura mazana mana muSMOORE Research Institute, inove nemvumo gumi nematanhatu yepasirese.
Midzanga Yekupisa, E Liquid Vapor Midzanga, Newport E Midzanga, Epen, Kusvuta Imwe nzira, E Midzanga Blister Pack,